The World of Moe Thanzin: နှစ်သက်မိတဲ့ နာမည်လှလှလေးများ
ရေးသူ ပွင့်မြုးဇင် at 4:26 PM
မမတို့ မိသားစုနာမည်လေးတွေ လှတယ်နော်မမ။
သမီးလေး မွေးရင်လဲ နာမည်လှလှလေးပေးနော်.
ချစ်လို့ တက်ဂ်တာဆိုတော့လဲ ရေးပေးရမှာပေါ့နော်။
ရှေ့မှာ အကြွေး ၂ ပုဒ်။
အစ်မပွင့်မြူးရေ နာမည်လေးတွေ အကြောင်းလာဖတ်သွား
တယ်ကျွန်တော်လည်း စာရေးရင် ဇာတ်ကောင် နာမည်ပေးတဲ့ 
အခါ အတော်ဒုက္ခရောက်တယ် နဂိုကလည်း ကဗျာဥာဏ်က
မရှိလေ တော့ ကျွန်တော့် ဇာတ်ကောင်တွေ နာမည်တွေများ
တုံးတိတိကြီးတွေ တစ်ခါတစ်လေ ထပ်တောင် ထပ်နေသေး တယ် ... ညီလေး နာမည် လှတယ်ဗျာ အပျံစားပဲ မိုးသံစဉ်ကို ... ကဗျာဆန်လိုက် တာ မိုက်တယ် နာမည်လှလှလေးတွေ
အစ်မ ဆီက လာတောင်းရမယ် နောက်မှ
မမတို့ မိသားစု နာမည်လေး တွေက လှလိုက်တာနော်... အဟဲ နောင့် နာမည် ကလဲ မေဇင် ဆိုတော့ မမ တို့ အမျိုး လို့တော့ မထင်ပါဘူးနော်...း))။ ဟုတ်ကဲ့ မမရေ...နောင့် တော့ သေသေချာချာ ကြီးကို စဉ်းစားရဦးမယ်..နောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ နာမည်တွေကို... အဟီး..နောင့် ကိုယ်တိုင်က စ မိသားစု ၀င်တွေရဲ့ နာမည်တွေကလဲ အာလုံး နောင့် မကြိုက်... အဟဲ..ရေးပေးမယ်နော်...
မပွင့်မြူးတို့ မိသားစုက နာမည်လှလှလေးတွေ ပေးတတ်လိုက်တာဗျာ.
စကားမစပ် ကျွန်တော့နာမည်အရင်းကလည်း ဇင်နဲ့ ပဲ နောက်ဆုံးစာလုံးက။ မပွင့်မြူးတို့ မိသားစုလို နာမည်လှလှတော့ ဟုတ်ဖူးဗျ..
အိမ်နာမည်နဲ့ ကျောင်းနာမည်ပေါင်းလိုက်တော့ နွေးနေခြည်ဖြစ်သွားတာပါ... ဟိး)
လာလည်တယ်နော်အမ စီဘောက်က အဖြူကြီးဖြစ်နေလို. ဒီမှာပဲရေးခဲ့တယ်..နောင်လည်းလာလည်ပါနော်.
မိသားစု အားလုံးရဲ့ နာမည်တွေက လှတယ်နော်... အဲဒီအထဲမှာ “မိုးသံစဉ်ကို” က အလှဆုံးပဲနော်...
ကျွန်မနာမည်ကတော့ ဖေဖေပေးတဲ့ နာမည်က ထိပ်ဆုံးနှစ်လုံးကို ယူပြီးချစ်သူရဲ့ နာမည်နဲ့ပေါင်းထားတာပါ...
ကျွန်မတို့က ညီအစ်မ (၃) ယောက်လေ... မမက ၀တ်ရည်... ကျွန်မက ၀တ်မှုံ... ညီမလေးက ပွင့်လွှာပါ... အားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာ ဖေဖေနာမည် တစ်လုံးပါတယ်လေ... သုံးယောက်ပေါင်းရင် ပန်းတစ်ပွင့်ပေါ့...